जिएफएन फाउन्डेसनद्दारा ताकेश्वरका २० परिवारलाई बाख्रा वितरण - Bidur Khabar
जिएफएन फाउन्डेसनद्दारा ताकेश्वरका २० परिवारलाई बाख्रा वितरण
विदुर खबर २०७७ कार्तिक २४ गते १९:५६
नुवाकोट । विपन्न वर्गका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालका लागि असल मित्र (जिएफएन) काठमाण्डौ फाउन्डेसनले तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ खानीगाउँका २० घरपरिवारलाई बाख्रा वितरण गरेको छ ।
आईतवार नेपालका लागि असल मित्र (जिएफएन) ले आय–आर्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले खानीगाउँका किसानहलाई बाख्रा वितरण गरेको हो । जिएफएनले प्रति कृषक एउटाका दरले २० वटा बाख्रा वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष डा. भिमलाल तामाङले जानकारी दिए । उनले स्थानिय रुपबहादुर तामाङ लगायत अन्य २० जनालाई एक÷एक ओटा बाख्रा वितरण गरिएको बताए ।
निशुल्क वितरण गरिएको बाख्राबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन टेवा पुग्ने जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका डा. भिमलाल तामाङले विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष तामाङले बाख्रापालन सजिलो पेशा भएको र राम्रो आयआर्जन गरी अरुका अघि उदाहरणीय बन्न किसानलाई आग्रह गरे ।
बाख्रा हस्तान्तरण गर्दै डा तामाङले भने, “बाख्राको स्याहारसुसार गरी यसबाट वर्षेनि राम्रो आम्दानी गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” वडा नम्बर ३ बाख्रापालनका लागि उपयुक्त वातावरण भएको वडा रहेको बताउँदै उहाँले व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन व्यवसाय अघि बढाउन उन्नत जातको बोका पनि आवश्यक रहेको जनाए ।
बाख्रा पाएसँगै कृषक रुपबहादुर तामाङले खुसी व्यक्त गरे । उनले बाख्रा व्यवसायको गाउँमा ठुलो संभावना रहेको भन्दै आगामी दिनमा व्यवसायिक रुपमा बाख्रापलन गर्ने बताए । बाख्रा वितरणसँगै गाउँमा बाख्रापालन कृषक समुह गठन गरि त्यसको रेखदेख र हेरचार गरिने बताइएको छ ।
नेपालका लागि असल मित्र (जिएफएन)ले नुवाकोटको किस्पाङ, म्याघङ, तारकेश्वर, दुप्चेश्वर र विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ तुप्चेमा विभिन्न परियोजनामार्फत काम गर्दे आइरहेको छ ।
यसअधि सो संस्थाले विदुर ७ तुप्चेका २० एकल महिलाका परिवारलाई समेत बाख्रा वितरण गरिसकेको संस्थाका अध्यक्ष डा. भिमलाल तामाङले जानकारी दिए । बाख्रा वितरण कार्यक्रममा जनता समाजबादी पार्टीका केन्द्रिय परिषद सदस्य राजन वम, जसपा नुवाकोटका उपाध्यक्ष अजित तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।